ကွီးတို့ညေးတို့လွဲနေသမျှ – MATE
ဒီနေ့မှာတော့ အမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး အကြောင်းအရာတရပ်ကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အမျိုးသားအင်္ဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားအများစု ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ လွဲမှားတဲ့အယူအဆများစွာကို အသိပညာပေးရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဖြင့် အမျိုးသားအင်္ဂါ အရွယ်အစားပိုမိုကြီးမားနိုင်တယ်။
အမှန်ကတော့ မိမိဘာသာမိမိအာသာဖြေခြင်းကြောင့် လိင်တံ အရွယ်အစားကြီးမားရှည်လျားမည် မဟုတ်ပေ။ သိပ္ပံပညာရှုထောင့်အရ အရွယ်ရောက်ပြီး အမျိုးသားတစ်ယောက်အနေဖြင့် တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် အာသာဖြေခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်ကြောင်း လက်ခံထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် တစ်နေ့လျင် နှစ်ကြိမ်ထက် ပိုပြီး အာသာဖြေဖြစ်လျင် အိပ်ရာပေါ်၌ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသလို အိမ်ထောင်ရေးသုခ လည်းမျှော်မှန်းထားသလောက် မရရှိပေ။
(၂) မိမိ၏ အမျိုးသားအင်္ဂါသည် ပုံမှန်ထက်သေးငယ်သည်ဟုထင်မှတ်ခြင်း။
အရွယ်ရောက်ပြီး အမျိုးသားအများစု၏ အမြင်၌ မိမိလိင်တံသည် အရွယ်အစားစံချိန်မမီဟုထင်မြင်ကြသည်။ စစ်တမ်းများအရ အာရှနိုင်ငံသားအများစု ၏ လိင်တံမှာထောင်မတ်ချိန်၌ ပျမ်းမျှအရှည် ၅ လက်မ ရှိပြီး လုံးပတ်မှာ ၃.၅ လက်မရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးအင်္ဂါအရှည်သည်လည်း ပျမ်းမျှ ၄-၅ လက်မမျှသာရှိပါသည်။ ထိုကြောင့် မစိုးရိမ်ကြပါနှင့်၊ အမျိုးသားလိင်တံများသည် ပုံမှန်ချိန်တွင် သေးငယ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း ထောင်မတ်ချိန်၌ အမျိုးသမီးများနှင့် ကိုက်ညီကြပါသည်။
(၃) အမျိုးသားအင်္ဂါရှည်လျားခြင်းကြောင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာလိင်ဆက်ဆံနိုင်သည်။အချိန်ကြာကြာလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခြင်းသည် အမျိုးသား၏သက်လုံနှင့်စိတ်အာသီသအပေါ်မူတည်ပါသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခြင်းကြောင့်လည်း နှစ်ဦးလုံး၌ လိင်စိတ်ဆန္ဒ ပိုမိုပြီးမြောက်မည်မဟုတ်။ လိင်စိတ်ဆန္ဒပြည့်ခြင်းသည် နှစ်ဦးလုံး၏စွမ်းဆောင်ရည်၊ အပေးအယူ၊ အနေအထား၊ နားလည်မှု၊ စည်းချက်ကိုက်ခြင်း၊ အစပျိုးခြင်းတို့အပေါ်မူတည်သည်။
(၄) အရက်၊ ဆေးလိပ်၊ ဆေးဝါးများသုံးစွဲခြင်း
အရက်၊ ဆေးလိပ်တို့ကြောင့်အမျိုးသားအင်္ဂါကြီးမားရှည်လျားနိုင်သည်မှာမဟုတ်ပေ။ ရေရှည်၌ ပန်းသေပန်းညှိုးခြင်းများပင် ဖြစ်နိုင်သည်။ တရားမဝင်လိင်တံကြီးထွားဆေး (ထိုးဆေး၊စားဆေး) များ သုံးခြင်းကြောင့် အခြားနောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ (ဥပမာ – အလုံးအကျိတ်များ၊ အနာများ) ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
(၅) အမျိုးသားအင်္ဂါအရွယ်အစားနှင့် အိမ်ထောင်ရေးသုခ
အရွယ်အစားကြီးမားရှည်လျားသောလိင်တံဖြစ်မှသာ မိမိနှင့် မိမိအဖော် နှစ်ဦးလုံး အိမ်ထောင်ရေးသုခ တစ်နည်း လိင်စိတ်ဆန္ဒ ပိုမိုပြီးမြောက် ပြည့်ဝစွာခံစားရမည်ဟု ထင်မှတ်ထားကြသည်။ လေ့လာချက်များအရ လိင်ဆက်ဆံဖူးသူ အမျိုးသမီးအများစု သည် ကြီးမားရှည်လျားသောလိင်တံ ထက် ကျန်းမာသန်စွမ်းသောလိင်တံ ကိုပိုမို နှစ်သက်ကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန် ပြီး အပေးအယူမျှမှသာ နှစ်ဦးလုံး၏ စိတ်ဆန္ဒအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် နဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ဗဟုသုတတွေ အမြဲဖတ်ရှုနိုင်အောင် MATE – မိတ် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး Page ကို Like and see first လုပ်ထားဖို့ မမေ့နဲ့နော့်။
Essay affordable-papers.net writing services are discovered in several areas like online and offline.
about battles, we certainly refer to problems which involve several kinds of people.
this info, it’s easy to get distracted and get rid of focus on the general article, which explains precisely why discovering something interesting to write about will often help.
Previous post ကွီးတို့ ညေးတို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် မေးနေတာတွေ